Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက် Nonstick Surface က Teflon အထည်အလိပ် - တရုတ် Jiangsu KingRay Composite
ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်၏ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ဖြန့်ချိစက္ကူအဖြစ် 0.15mm ၏အထူအတွက် teflon coated ဖန်အထည်ကိုဖန်ဆင်း Teflon အထည်အလိပ်,
PTFE Glass ကိုပိတ်စကဘာလဲ?
Teflon ထည်အရည်အသွေးမြင့်မားဖန်မျှင်ထည်များ လုပ်. , high-performance ကို PTFE အရည်ပစ္စည်းနှင့်အတူ impregnated သည်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, ဒီ PTFE ဖန်မျှင်ထည်ထည်မြင့်မားသောအပူချိန်၏အားသာချက်ကိုတှနျးလှနျနှင့် nonstick မျက်နှာပြင်ရှိပြီး coated ။
Telfon coated ထည်၏ specification
max အကျယ် (မီလီမီတာ)
အလေးချိန် (ဆ / m2)
PTFE အကြောင်းအရာ (%)
ဆန့အစွမ်းသတ္တိ (N / 5cm)
မြင့်မားသောအပူ -70-360C ဒီဂရီကာလအတွင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လွှတ်ပေးရန်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုတှနျးလှနျ
non ချောင်းကိုမျက်နှာပြင်, ဘာမှမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလိုက်နာစောင့်ထိန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူသည်
FDA က nad LFGB ခွင့်ပြုချက်, မီးဖိုကှနျ့, BBQ ဖျာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (FPC) ၏ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ဖြန့်ချိစာရွက်အဖြစ်, 0.15mm အကြံပြု
နေရောင်ခြည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဆဲလ်နဲ့ Eva များအတွက် Rlease ရုပ်ရှင်, 0.25mm နှင့် 0.35mm အကြံပြု
အိတ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုစက်ခါးပတ် fusing စေ, 0.13mm အကြံပြု
လက်သုတ်ပဝါစက္ကူထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပေါ်ကိုခါးပတ်, 0.25mm အကြံပြု
မီးဖိုကှနျ့, ကိတ်မုန့်အဘို့မုန့်ဖုတ်ကှနျ့အဖြစ်, 0.11mm, 0.13mm, 0.20mm အကြံပြု
အထည်ချုပ်ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အ teflon ခေါင်းအုံးသို့ လုပ်. , 0.11mm အကြံပြု
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့က Non-ချောင်းကို & အပူကိုခံနိုင်ရည် PTFE ပိတ်စကဒီစျေးကွက်အတွက်သာလွန်ပါသလဲ
ယခုငါတို့ 13 အပေါ်ယံပိုင်းစက်တွေရှိသည်, 24 နာရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးလျှော့ချစေသည်သော running ။
ငါတို့သည်အကောင်းဆုံးဂျာမန်ယက်လုပ်ခြင်းစက် DORNIER အတူခိုင်မာတဲ့ဖိုက်ဘာမှန်အချို့မျိုးကိုယျ့ကိုယျကိုမျိုးကိုရက်နှင့်ထိုင်ဝမ်နှင့် CPIC ကနေတချို့က high-performance ကိုဖန်ဖိုင်ဘာကိုဝယ်ကြလော့။
ကျွန်တော်အသုံးပြုနေသည့် PTFE ပစ္စည်းကို 100% တင်သွင်း Dupont & Dakin PTFE ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုမှာအကြှနျုပျတို့ PTFE အဝတ်နဲ့ကျော်ကိုနိုင်ငံပေါင်း 100 မှရောင်းချနေကြသည်။
ကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ, အထည်အလိပ် coated PTFE ၏အပြည့်အဝကြင်နာမှုရှိသည်။
PTFE ပိတ်စ , 1mm မှ 0.06mm ကနေအထိအထူ, သို့ကြောင့်လုပ်နိုင်ကြောင်း , Anti-ငြိမ် porous, ချောမွေ့, Rough နှင့်အမှောင်ဘရောင်း, အလင်းဘရောင်း, အဖြူရောင်, အနက်ရောင်နှင့်အခြားအရောင်များကိုအရောင်သို့ပါစေ။
PTFE တိပ် ကိုအကောင်းဆုံး Dow-Corning Silicon ကော်အတူ 0.08mm ထံမှ 0.30mm အထိအထူ, ။
PTFE ခါးပတ် , ပွင့်လင်းကွက်ခါးပတ်ကဲ့သို့ PTFE ပိတ်စခါးပတ်, အဆုံးမဲ့ခါးပတ်, etc ပူးတွဲအတူခါးပတ်
စားစရာဘို့ PTFE ဖျာ & ကှနျ့ ဒါအပေါ် BBQ Mat, မီးဖိုကှနျ့နှင့်တူသော။
ယခင်: သားရေလမိုင်းစက်များအတွက် PTFE အင်္ကျီကိုဖိုက်ဘာမှန်အထည်
နောက်တစ်ခု: Excellent ကဖြန့်ချိအိမ်ခြံမြေမဟုတ်သော Stick PTFE coated ထည်